ရိုမန်းတစ်ညနေပိုင်း | မိတ်ဖက် | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
ရိုမန်းတစ်ညနေပိုင်း | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
အောင်မြင်သောမိတ်ဖက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပထမဦးဆုံးအရူးအမူး၏နောက်ဆက်တွဲအဆင့်အပြီးသည့်အခါတဖြည်းဖြည်းနေ့စဉ်အကျိုးအမြတ်အထက်လက်ပုံမှန်ရင်ခုန်စရာအချိန်လေးအထူးသဖြင့်အရေးကြီးလှသည်။ တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်အိပ်ပျော်မသင့်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဒီအဘို့, အနည်းငယ်ပြင်ဆင်မှုတွေအတော်လေးလုံလောက်ပါပြီ - စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်ပေါ်ထွန်းသင့်ပါဘူး။
တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးဒါအောင်မြင်သော - အတူတကွဖန်တီး
ကလေးတွေဟာရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးနေဆဲဖြစ်နိုင်, အိမ်၌ရှိကြ၏။ သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးကလေးထိန်းမှာနေ့ချင်းညချင်းအမြိုးသားအပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူနေဖို့ကပိုကလေးများရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါကအထူးသဖြင့်စိတ်အေးလက်အေးညဦးယံအချိန်ကိုခံစားစေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်များအတွက်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးအတှကျကလေးထိန်းပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအတားအဆီးမရှိခြင်း။ အဆိုပါအချစ်ဇာတ်လမ်းထို့နောက်ထို့နောက်ပယ်ရပ်တန့်နိုင်အောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေဆဲအစောပိုင်းအိပ်ရာမှလက်ျာဘက်သွားပါ။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်နေဆဲမဟုတ်အလွန်အကျွံအချိန်သောကြောင့်, သငျသညျထားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမတိုင်မီတွေ့ဆုံရန်သငျ့သညျ။
လူတိုင်းမအချစ်ဇာတ်လမ်း၏တူညီသောစိတ်ကူးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်လျော်သောဂီတနှင့်သိမ်မွေ့အလင်းရောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဖယောင်းတိုင်, မီးကိုမအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါသေချာပါစေ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းမှုကိုအလင်းအိမ်။ အသစ် LED ဖယောင်းတိုင်ကိုလည်းပျော့ပျောင်းသောအလင်းရောင်ပူဇော်ပေမယ့်လူတိုင်းရဲ့အရသာမှမရှိကြပေ။
တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးနှစျခုအတှကျအရသာညစာတစ်ခု ပို. ပို. ကောင်းသောစိတ်ကူး။ ဖယောင်းတိုင်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန်နှင့်အတူတစ်ဦးကောင်းတဲ့လေထုလျင်မြန်စွာတက်လာပါတယ်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လှလှပပ set စားပွဲပေါ်မှာ by လျင်မြန်စွာနေ့စဉ်အသက်တာ၌ထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလေထုဖန်တီးရန်။
အဘယ်သူသည်အပိုချက်ပြုတ်ချင်ပေမယ့်လည်းအိပ်ရာညာဘက်အပေါ်တစ်ဦးပျူငှါနွေးထွေးသောညဦးယံ၌မထားဘူး။ တစ်သိမ်မွေ့နောက်ခံအလင်းတစ်ခုခုလှပသောအလှဆင်နှင့်အတူ,anice သောက်နှင့်အချို့သော nibbles ဟာရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးဖို့ကောင်းတစ်ဦးက start ရဖို့သေချာနေပါတယ်။ သင်ကပုခက်လွှဲပဲဖြစ်ဖြစ်, ဂီတနားထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် DVD ကိုကြည့်ဖို့ပြောနေတာ, ဒီအရာဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။
အရှင်ရင်ခုန်စရာခံစားချက်အချို့ကိုသင်မှတ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်ရေသွန်မထားဘူး။ ပြဿနာတွေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြောင်း, တဦးတည်းမဆိုခွအေနမြေားဖျော်ဖြေသငျ့သညျ။ ရွှေ့ဆိုင်းဟုတ်ကဲ့ဖျက်သိမ်းသည်မဟုတ် - အခြားသောနေ့ရက်အချိန်ထို့နောက်ရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်အနမ်းလည်းအပြန်အလှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြုံတွေ့ရ, မကောင်းတဲ့အသက်ရှုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ကြက်သွန်ဖြူသို့မဟုတ်ကြက်သွန်နှင့်အတူတစ်ဦးကမုန့်ညက်ထို့ကြောင့်ပိုကောင်း menu ပေါ်တွင်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ခံစားချက်အတွက်ကြောင့်လည်းနည်းနည်းရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီစတိုးဆိုင်အချိန်မီမဟုတျပါဘူးနိုင်သလား, သင်ပိုကောင်းရွှေ့သင့်ပါတယ်။
အလွန်အရေးကြီးပါသည်အချိန်မှန်ဖြစ်တယ်, ဒါညနေပိုင်းတွင်လည်းတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစတင်နိုင်ပါသည်။ အခြားနေ့၌ဒါပိုကောင်းလုပ်ဖို့အချိန်ပို။
ကြိမ်ကယ့်ကိုမျှော်လင့်မထားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပျက်ဒါမှမဟုတ်ခံစားချက်လှည့်လျှင်, သင်ကကနေခံစားချက်စာကိုလုယူရန်ပျက်ကွက်သင့်ပါဘူး။ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်များအတွက်အသစ်အခွင့်အလမ်းမကြာမီနောက်ကျောလာရန်သေချာသည်။
relationship Killer - တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
မိတ်ဖက် - ကလေးများနှင့်အတူပြောင်းလဲပေးသော?
ကလေးများမပါဘဲအားလပ်ရက်အပေါ် mom နဲ့ဖေဖေ
အိုး Valentine Day ကို
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကဗျာကိုအချစ် - & တော
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကဗျာတစ်ပုဒ် - သင်နှင့်ငါ
သူ့မိဘ - မိတ်ဆွေတို့ကိုရှိနေဆဲ
တစ်ဦး aphrodisiac အဖြစ်အရက်
အတူတူ Baden ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစားမှ
သစ္စာဉာဏ်အလင်း - ဘယ်လိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရသနည်း
အမျိုးသမီးရင်သား၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို
ဆက်ဆံရေး = လိမ်လည်မှုအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ?
အခန်းက္ပ Play စ & လိင်
Soulsex - ထိုဖက်အသစ်အလိုဆန္ဒ
Make-up, လိင် - ကြောင်းအလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း
ခေါ်ဆောင်သွားအရောင်အမျိုးသားများအတွက် & စုံတွဲများ
Fehlen Ihnen Themen rund um Partnerschaft und Sexualität? Fehlen Ihnen bestimmte Themen in unserem Lifestyle Forum? Gerne nehmen wir neue Themen auf, die auch nicht unbedingt mit Familie und Kindern zu tun haben müssen. မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်!
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းအကြံပေးချက်များ - ရိုမန်းတစ်ဥယြာဉျ